Taageerayaasha Atletico Madrid oo DOOLIYAAL/JIIR Roobka uga dhigay Goolhayaha Real Madrid ee Thiabut Courtois…..+SAWIRRO – Gool FM
Taageerayaasha Atletico Madrid oo DOOLIYAAL/JIIR Roobka uga dhigay Goolhayaha Real Madrid ee Thiabut Courtois…..+SAWIRRO
(Madrid) 09 Feb 2019. Taageerayasha Atletico Madrid ayaa Dooliyaal/Jiir Boombale ah ku soo tuuray goolhayaha Real Madrid Thiabut Courtois ka hor inta aan la baasan ciyaartii dhaweyd ee looga adkaaday 3-1.
Goolhayihii hore ee Chelsea ayaa 154 kulan u saftay Ateltico saddex sano uu la joogay isagoona ka caawiyay inay ku guuleystaan Copa del Rey, LaLiga Santander iyo Europa League.
Taageerayaasha Atletico ayaa aaminsan in Goolhayaha reer Belgium uu khiyaanay kooxdooda maadaama uu ku biiray kooxda ay ku coltamaan Magaalada Madrid.
Ma ahan oo kaliya inay Dooliyaan ku soo tuureen oo waxay sidoo kale jajabiyeen boorka ku qornaa Magaca Thiabut Courtois oo lagu dhajiyay bannaanka garoonka Cusub ee Atletico iyagoona Magaca ka masaxay.
HORDHAC: Manchester City vs Chelsea.....+Sadaasha Khabiirada Sky Sports iyo BBC